उपचारमा आएका पुरुषहरुको लि”ङ्ग देख्दा लाज लाग्छ- महिला डाक्टर ! – live 60media
मानिसहरु आफ्नो जिविकापार्जनको लागि आ आफ्नो पेशा ब्यापार ब्याबसाय आदी गर्नु नै पर्दछ । तर कतिपय पेशा जागीरहरु आफ्नो इच्छाएको भए पनि अलिक गाह्रो हुने गर्दछ । जस्तै महिला यौ`न स्वास्थ्यकर्मि तर पुरुष मान्छे आफ्नो समस्या लिएर महिला डक्टरलाई भेटन गए भने अलिक गाह्रो अबस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ ।
आज हामीले एक जना महिला स्वास्थ्यकर्मीको यस्तो अबस्थामा के हुन्छ भनेर केही जिज्ञासा राखेका छौं । उनले आफ्नो अनुभव हामीलाई सेयर गरेकी छिन । महिला डाक्टरको पहिलो अनुभवमा उपचारमा आएका पुरुषको लि`ङ्ग देख्दा लाज लाग्छ भन्ने कुरा सेयर गरेकी छिन । यौ८न रोग तथा प्रस्तुती गराउने महिलाले उपचारको लागि महिला डक्टर नै पाए उचित हुन्छ ।
त्यस्तै यो रोग सम्बन्धी समस्या लिएर गएका पुरुषको लागि उपचार गर्ने पुरुष डक्टर भए उपचारमा सहज हुन्छ । तर सबै स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो कुरा सम्भव हुँदैन् । असहज परिस्थिती आएपनि चिकित्सकले गर्नै पर्छ र बिरामी उपचारको लागि जानै पर्छ । विपरित बिरामीमा यस्तो उपचार गर्न कठिन भएपनि गर्नै पर्ने हुँदा बिरामी पनि लजाउँनु हुँदैन् र चिकित्सकले पनि यस्तो कार्यमा लाज मान्नु हुँदैन् ।
यस्तै यौ*न तथा प्रस्तुती रोग विशेषज्ञ डक्टर सृजना शर्मा पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतलम पोखरामा कार्यरत रहेकी छन् । उनले आफुलाई सुरुमा पुरुषहरुको देख्दा लाज लागेको खुलासा गरेकी छन् । युवा अवस्थामा यो रोगको बारेमा सिकाइ भइरहेको अवस्थामा यस्तो समस्या थुप्रै झेलेको बताएकी छन् । तर अब सिक्ने अवस्थामा होस या काम गर्ने क्रममा होस् यस्तो कुरा देखेर लाज मान्नु हुँदैन् । सिक्ने बेलामा सहज तरिकाले सिकेको छ भने काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।
सृजना शर्मा महिला तथा प्रस्तुती रोग विशेषज्ञ डक्टर यो पनि पढ्नुहोस महिला र पुरुष एकअर्काप्रति आकर्षित हुने प्राकृतिक नियम नै हो । जीव विज्ञानअनुसार महिला र पुरुषको मस्तिष्कमा विपरीत लि’ङ्गीप्रति आकर्षक गर्ने गुणहरु हुन्छन् त्यसैले गर्दा बिपरित लिं’गीप्रति आकर्षण हुन्छ । तसर्थ किशोरावस्थामा प्रवेश गरेसँगै एकअर्काप्रति आकर्षित हुने सामान्य मान्नुपर्छ ।
← १४० केजीकी श्रीमति,४५ केजीका श्रीमान,रुदारुदै सकियो अन्तरबार्ता- (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
५ बर्षमै दुनियाँ चकित पार्दै जुम्ल्याहा दाजुभाइ, घरमा पुग्दा सोच्नै नसकिने प्रतिभा हेर्नुहोस. →